PressReader - Isolezwe: 2018-09-13 - Kuboshwe abasolwa kwawokubulala
Kuboshwe abasolwa kwawokubulala
Isolezwe - 2018-09-13 - IZINDABA - INTATHELI YESOLEZWE
KUBOSHWE amadoda ayisithupha asolwa ngokubulala ezigamekweni ezimbili ezehlukene ezenzeke KwaZulu-Natal ngeledlule.
NgoLwesibili, amaphoyisa aseCreighton nawaseXobho abophe owesilisa oneminyaka ewu-30 osolwa ngokubulala umlimi wakule ndawo epulazini lakhe iLyn Avis Farm, ngoMgqibelo.
Kuthiwa umsolwa owayehamba nabanye abathathu abahlomile wabopha unkosikazi kaMnuz Peter Scott (66) owadutshulwa wabulawa kulesi sigameko.
Kuthiwa bathatha amaselula, ama-laptop nezinye izimpahla maqede babaleka. Kutholwe isibhamu, amaphoyisa athi sisayohlolwa ukuthi ngabe yiso yini esadubula umufi.
Kwesinye isigameko amaphoyisa aseVerulam ngokubambisana naweCrime Intelligence abophe abasolwa ngesikhathi benomkhankaso wokulwa nobugebengu ezindaweni ezehlukene okubalwa kuzo iNanda, iNdwedwe naseCottonlands. Kulo mkhankaso wokufuna izigebengu kuboshwe abasolwa abayisihlanu abatholakale nempahla entshontshiwe okukhona kuyo amaselula, imoto nezinye izimpahla.
Abasolwa abaneminyaka ephakathi kuka-18 no-30, kulindeleke ukuthi bavele enkantolo kusasa. Ababoshiwe banukeka esigameko sokubulawa kukaMnuz Dhir Singh nowakwakhe uNkk Kay Singh, izidumbu zabo ezatholakala emzini wabo oseCottonlands ngesonto eledlule.
UKhomishana wamaPhoyisa KwaZulu-Natal osabambile, uLt General Nhlanhla Mkhwanazi, uncome ukusebenza kwamaphoyisa ngokuzimisele okuholele ekutheni kuboshwe abasolwa.
“Ngifisa ukuncoma wonke amaphoyisa abebambe iqhaza kule mikhankaso nokuholele ekutheni kuboshwe izigilamkhuba. Akwamukelekile ukuthi abantu babulawe ngalolu hlobo, amaphoyisa ngeke aphumule bengakaboshwa abanye abasolwa,” kusho uMkhwanazi.